सशस्त्र प्रहरीले डोजर लाएर धमाधम चर्चहरु भत्काउन सुरु ! हाम्रो सांस्कृतिमाथि नै हमला भन्दै चर्च बन्द गर्ने नीति — SuchanaKendra.Com
सशस्त्र प्रहरीले डोजर लाएर धमाधम चर्चहरु भत्काउन सुरु ! हाम्रो सांस्कृतिमाथि नै हमला भन्दै चर्च बन्द गर्ने नीति
माओकालिन चीनको झल्को आउने गरी चिनियाँ प्रहरीले चर्चलाई भत्काउन सुरु गरेको छ । चर्चहरूमार्फत पश्चिमी देशहरुमा चीन विरोधी गतिविधि बढेको भन्दै चर्चहरु भत्काउन सुरु गरिएको चिनियाँ संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
कम्युनिस्ट देश भएका कारण धार्मिक स्वतन्त्रता भएपनि चर्चमार्फत पश्चिमा देशहरुले चिनियाँ संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप बढाएको भन्दै डोजर र बम विस्फोट गराएर चिनियाँ सरकारले चर्चहरु भत्काउन सुरु गरेको हो । साभार kathmandudaily.com बाट